koowheel ukuba Khawuyisondeze e Hong Kong Global Imithombo Consumer Electronics Bonisa 2019
ixesha Post: Mar-14-2019
koowheel, umboneleli phambili kwihlabathi izisombululo zohambo-mfutshane umgama, uza phambi kwi-Hong Kong Global Imithombo Consumer Electronics Bonisa, elinye lawona yorhwebo neeletroniki ibonisa zehlabathi eyayibanjelwe e-Hong Kong evela Epreli 11- 14, 2019 koowheel owayelapho: 2F36 Funda ngaphezulu »
Le Koowheel Electric self balancing scooter E1 ulula kodwa sinamandla, lomenzi Innovative uyilo nendlela epholileyo, LED isikrini kubonisa ngokupheleleyo ibhetri nesantya, super shoka yokufunxa ngerabha 8inch ivili ukuyilandela. Ngaphandle, isongiwe yodwa kwaye enze lula. Nangona kunjalo, ingaba ukuchongwa ...Funda ngaphezulu »
Kutheni ufuna ezimbini Isondo Self Ukulinganisela Electric Isithuthuthu
ixesha Post: Mar-21-2018
Kukho amanye Ulobumba ngakunye lowo iingxaki kunye nenkqubo ibhetri kunye nebhodi ngaphakathi kokuba agxothwe. Ibhodi kwakhona bazilungiselela kunye abenzi uhlobo ephendulayo kukulandela, apho uthe shift ubunzima yakho. Xa akhwele Swagtron, 1st unyawo inyathelo ngexesha ngasemva. Ukuba kwenzeka ukuba ndayame ba ...Funda ngaphezulu »
Xa kwabonakala imifuziselo eziziiprayimari ezifumanekayo ezivenkileni, babenikelwe kuphela bekumele ukuba kusetyenziswa izithuthi lomthonyama, ukuba olukhulu xa wayefuna ukuya endlwini umhlobo, kwisikolo samabanga aphakamileyo, okanye ezinye beya. Le Rubber electric ekhawulezayo iza kusisithintelo disc angasemva, pneumati omkhulu ...Funda ngaphezulu »
Nguwuphi umbuzo kufuneka kuqwalaselwa? Kakade Safety wayo. Ngenxa yoko, nathi Koowheel electric skateboards mpahla sele ifunyenwe CE, RoHS, iziqinisekiso FCC UN38.3. Kanye imoto okanye ibhayisekile, ezi skateboards zombane Ukongezelela kufuneka kamnandi-igcinwe ngenjongo ukuze isebenze kakuhle. Ukuba mhlawumbi ...Funda ngaphezulu »
Ngokumalunga kokuyilwayo le Rubber, usenokuba kufuneka ukucinga ezinye iinkalo zophuhliso yayo. Ukuba ungathanda ingcamango yokuba i Rubber yombane, kodwa wena umthande setup wakho, kufuneka uthathe ujongo kwi Eon: i powertrain zaseprayimari seemodyuli zombane. Kweli hlabathi ekhawulezayo komfundi efana neyethu, ...Funda ngaphezulu »
Ukuthenga Quality Good kwaye Cool Electric Rubber
ixesha Post: Mar-02-2018
Ibhetri uyala ngokupheleleyo malunga 2-3 kwiiyure, sithembele kokuba amanzi kangakanani. Mhlawumbi uvale okanye ukuvula isandla sakho kangangoko ufuna, ngaphandle worry kwayo ukuwa okanye bangantingeli kude. Endaweni yoko, akukho nanye kwezi iiseli "ezikumgangatho ophezulu 'abaninzi baba nomthamo kufutshane capacit rated ...Funda ngaphezulu »
Spring uyeza kamsinya, angathanda ukuba aye uhambo ngalo naliphi na ixesha? Okanye sifuna ukuphuma nokuphonononga imihlaba ehlukene? Ingaba ufuna ukunika wena okanye usapho lweholide obukholekayo hetisekeke? Ukuba impendulo ngu Ewe, nceda khetha ilanga ukuya ngaphandle, ngoko ke uya ukubamba ubuhle engalindelekanga ekupheleni ...Funda ngaphezulu »
Obude Journey By Electric Rubber
ixesha Post: Feb-23-2018
Kuba khona ukuya kwindawo apho kuthatha ezintsha ethile kakhulu ukuba ume ngaphandle ngaphakathi kwindawo Rubber yombane; ongakhetha ezifana okungenisa elekhtrons kwaye in-wheel Motors. Ulawulo wireless kude banokugqalwa isuntswana kwinqanaba amandla kokuba eyenziwe ngeplastiki zakhiwe kwaye uvakalelwa kakuhle che ...Funda ngaphezulu »
Ngokuqhelekileyo, ngenxa ubungakanani kunye ubunzima skateboards zithwele kubo into. kakhulu abasebenzi bethu eJamani-based kudala ukuba ukwazi ngayo "electro-ukushukumiseka", nto leyo yinkxalabo enkulu kwezopolitiko eJamani ngokwenene kumazwe zonke eYurophu bonke. Sinikezela prime-inotshi lomthengi kunceda a ...Funda ngaphezulu »
Nguwuphi na ukhetha, isithuthuthu zombane okanye Skateboards
ixesha Post: Feb-01-2018
Iivenkile ezininzi intanethi baye baqalisa ukuhambisa ngezithuthuthu self balancing kunye hoverboards once more. Isithuthuthu Cwaka kuzisa ngokufanelekileyo ngexabiso, umgangatho prime avenue-zomthetho, i Koowheel ngezithuthuthu eluhlaza zombane zokuthengisela eYurophu. Le wagaleleka ngesandla okanye ezinyaweni-esebenza evumela ukuba uyeke i scooter nangoko ngaphandle ...Funda ngaphezulu »
Kwakhona sasicinga-malunga enye yeendlela eziphambili ukugcina imimoya esebenzayo kwikhonkco drive. Hayi hoverboard yonke kodwa kuphela ezi hoverboards zombane banayo izitifiketi efanelekileyo nabakholose ukusebenzisa - oku kuquka zonke 10 hoverboards iphezulu kakhulu zidweliswe ngezantsi. Baya kokuba de bezisebenzisa ...Funda ngaphezulu »
Abanama-zobugcisa self balancing ubuchule, ezicuthiweyo kabini kunye gyroscope ezakhiwa-in sensor womxhuzulane, kulula kakhulu ukuba ukulawula, ukutshintsha nje somzimba wakho ubunzima intliziyo, scooter yakho iya eguquguqukayo udlulisele phambili, ngasemva, ekhohlo, ekunene, kwaye babuyele 360 ​​idiploma a ndawo. Enye fe best ...Funda ngaphezulu »
Unique Different Self Ukulinganisela Scooters
ixesha Post: Jan-12-2018
Le doli kufuneka uzimisele njengoko umgangatho enjinini. Ewe, kuza lwamaxabiso kuwe intywenka yemali, kodwa ukuthatha jonga kwi ulwakhiwo, kunye nomgangatho okupheleleyo zolwakhiwo le nkwenkwe esiyingozi, wena sisheke bezibuza ukuba okanye hayi iba sombane kwindawo esitheleyo. Lula rech ...Funda ngaphezulu »
Isilumkiso ukusetyenziswa Rubber sombane kunye nokhuseleko
In order to reduce any type of risk, we recommend you carefully heed the following warnings. Use KOOWHEEL Electric Longboard sensibly and responsibly. KOOWHEEL Electric Skateboard is a hi-ech transport vehicle, but its incorrect and inappropriate use can cause injuries. Always wear shoes, a hel...Funda ngaphezulu »
Yeyona Mnandi Hoverboard Ukulinganisela Scooters 2018
Njengoko ngokunjalo, apabuuta yombane iza ngemibala ezahlukeneyo kwaye kusenokwenzeka ukuba hombisa kunye istikha leyo kuluncedo cowl izonwaya ukuba pops up zonke njalo rhoqo. Kakade ke, ukuba uhlobo kusenokwenzeka ukuba akhawulezise na oya kuyo naphi na ukuba sizimisele kwi ngaphakathi no ...Funda ngaphezulu »
CLEANING Always close the power port before cleaning. Always disconnect KOOWHEEL Electric Longboard from the charger before cleaning it. Do not use thinners or other solvents to clean since they could damage surfaces. Use a damp cloth to clean plastic parts. Do not wash KOOWHEEL LONGBOARD with ...Funda ngaphezulu »
I-Electric Rubber iya kuba Christmas Gift Cool ngo-2018?
ixesha Post: Dec-22-2017
Christmas uyeza kamsinya. Yintoni umnqweno wakho kunyaka omtsha? Ngaba ufuna ukuba isipho epholileyo soyis'ingqondo abahlobo okanye iintsapho zenu? Mhlawumbi wena ikrwelwe ezinye phezulu yokudlala umnqweno-izintlu nabo bonke-macala izimvo ezinkulu isipho, ngoko abanakukwazi ukufumana isipho elifanelekileyo? Ukuba ukhangela som ...Funda ngaphezulu »
Xa nasiphi na isithuthi yombane, kukho iintlobo ezininzi ephambili braking- eliguqukayo, ukukhuhlana, kunye unyathela okungenisa. Bonke basebenzisa iindlela ezahlukeneyo abazimisele phantsi isithuthi. Ukuxabana elekhtrons neziqhoboshi zochuku na uhlobo olunye iziqhoboshi ezisetyenziswa ezimotweni eziqhelekileyo. Ngokusisiseko, ukukhuhlana agai ...Funda ngaphezulu »
Yintoni umahluko phakathi nesigcina isithuthuthu skate nesigcina-ntloko?
A umbuzo apho abantu bebuza ukuba, 'Yintoni umahluko phakathi nesigcina isithuthuthu skate nesigcina? "Ngaphandle umahluko ezicaceleyo ngembonakalo, isithuthuthu skate iminqwazi ngokwenene ezahlukileyo ezisebenza ngeendlela ezininzi, kwaye ungathanda ukuba uqinisekise ukuba uthenge uhlobo lasekunene ntloko ngenxa ri ...Funda ngaphezulu »
Ngokuqhelekileyo awufuni ukuthwala imigama zakho zombane Rubber elide ngesandla, kwaye ubhaka ibhodi kungenza kube lula kakhulu ukuba wenze njalo. Nge ubhaka ibhodi, unako kwakhona uzive ukhululekile ukuba uthwale ibhodi yakho ukusebenza ngexesha kusasa lemvula yaye ndikhwele kulo ekhaya xa sele sunnier ngokuhlwa. Th ...Funda ngaphezulu »
Kukho hoverboards ezininzi mvume apho phandle ezifumanekayo ezivenkileni, kwaye ukhetha ukuqinisekisa uya kuba mnye ngokukhuselekileyo ukuze ndikhwele wena okanye abantwana bakho. Ezi hoverboards ziyafumaneka kwi mveliso ezahlukeneyo ngokupheleleyo ngobukhulu ezahlukeneyo kunye nefomu ukwenzela ukuhlangabezana nemfuno mntu. The ...Funda ngaphezulu »
Koowheel 2nd Generation Electric Rubber Imiyalelo
ixesha Post: Nov-29-2017
skateboards zombane ukuze utshintshe beya yakho
ixesha Post: Nov-03-2017
Njengoko izinga abantu ophilayo liyaqhubeka nokwanda, abantu abaninzi bakhetha besukela nendlela ngakumbi lula ubomi. Ingakumbi youngers, bothanda ukuphonononga izinto ezininzi ezintsha umdla. Ngoko, kuba imfuno ephakamileyo Isixhobo zokuhamba-mfutshane kude. Kwelinye icala, banokuba ingxoxo ...Funda ngaphezulu »
China ngaphandle lezemiDlalo Electric Self Ukulinganisela Scooters
ixesha Post: Oct-27-2017
Kungenxa yokuba ezi izinto ukushukumiseka lobuqu zingaxelwanga ngenxa yokuhamba umgama omde, ke ziyilelwe ngobulungisa ukwenza yokuhamba elifutshane lula kwaye extra kakuhle. Ukunceda ukuba iBluetooth zokufumana umsebenzi phones ezilungileyo stereo umdlalo ezahlukeneyo iiyunithi. Kunye nezi mpawu, le hambisa ...Funda ngaphezulu »
Kutheni I-E-Rubber Ngoko Sizzling Kwaye bamkelwa wena.
ixesha Post: Oct-19-2017
Yinyaniso ngokupheleleyo, xa besithi ukuba unique, kukho uhlobo olunye ukuze eyaziwa ngokuba iOS kwimarike kakade. singathathwa Ezi ngezithuthuthu zombane ngesandla-free okanye Rubber yombane ukuya kwiindawo million, kwaye ayinamsebenzi ikokubize ngayo. Koowheel inguqulo entsha Electric ...Funda ngaphezulu »
Enamavili Electric Ukulinganisela izikuta umdali Ukusuka Koowheel
ixesha Post: Oct-12-2017
I Koowheel E1, i-2 ivili kumiwe enamavili Self Ukulinganisela Electric scooter kungenzeka enye ubunzima incinci kunye nowobulali tye autos umthuthi lobuqu kwiplanethi yethu. Kuyinto Koowheel Patent Innovative uyilo nendlela epholileyo, iintlobo ezahlukeneyo headlamps kunye isibane nomsila ezizodwa; Kukho LED d ...Funda ngaphezulu »
Uluhlu yenye ingqalelo kubalulekile kanti yakukhetha isithuthi kagesi kuxhaswe. Self ukulingana scooter yezithuthi nesezantsi ngesantya, yonke impahla efana twatse. Developed yi Koowheel, i Hoverboard K7 yi elilodwa lomenzi njenge "ivili-mbini, car.R zabucala self-balancing ...Funda ngaphezulu »
Koowheel isizukulwana 2 e-Rubber ikhwele yokuqala
ixesha Post: Sep-29-2017
Hi ~ Ngenxa Koowheel isizukulwana we2 electric Rubber Kooboard nguye Rubber yokuqala zombane ebomini bam, yaye kunqabile bachithe imali ukuthenga yokudlala ebiza onjalo (Ukongeza, bathenga umzila ibhayisekile with "isizathu esilungileyo" ...) ngoko ndikukhuthalele ukuya epakini. Ndithe painf kakhulu ...Funda ngaphezulu »
Malunga DIY Electric Rubber
Kunye Rubber sombane zezona kushushu kwaye kwamkelwa ngabantu abatsha mihla, logama nje ngumnikazi ibhodi ukulinganisela zombane kakhulu, kusenokwenzeka ukuba abanye DIY kuxhomekeke zabo. Kutshanje ndifumanisa ethile Rubber cool DIY kwi Instagram. Pace: A ekhawulezileyo E-longboard kuya kunceda ...Funda ngaphezulu »
Isizathu yokubiza self balancing isithuthuthu njenge "Hoverboard" kukuba ngoxa ekhwele, kubonakala ngathi wafukama inani intshi ngasentla emazantsi. Khumbula ukugcina uqhagamshelwano emhlabeni. Le self wheel-ezimbini elihle balancing scooter yombane ukuba ukulungele ukunika indlela ngakumbi ...Funda ngaphezulu »
Yenza elitsha lokuqalisa Ubomi Nge Koowheel hoverboard K7
ixesha Post: Sep-12-2017
Yonke imiba ingqalelo, ndiye ukuxhasa le Kuluvo kunye kraca Koowheel entsha K7 Self Ukulinganisela Isithuthuthu. I KOOWHEEL K7 hoverboard 8.5inch hoverboard amavili ezinkulu off road Self Ukulinganisela Isithuthuthu ngokuqinisekileyo ingqalelo phakathi kwenye kuzo zonke kuphela abambalwa Ulobumba ngakunye ezimbalwa oza ul la ...Funda ngaphezulu »
Oyena Holiday Trip Tool-Kooboard ubomi cool
ixesha Post: Sep-05-2017
I "E-Ibhodi" kwi mzuzu ayafumaneka kwimarike kuphela asekelwe iintshukumo ethandwa, iibhodi etsomo. Ngoku siyabona ukuba abantu besanda abantu ngokuwa uthando sesi sixhobo zokuhamba. Kutshanje, omnye phezulu ezintlanu inkampani hoverboard brand China abaphuhlisa isizukulwana we2 longboard yombane ...Funda ngaphezulu »
Bluetooth Glorious Self Ukulinganisela Scooters
ixesha Post: Aug-29-2017
Nangona, enye yeendlela ezigqwesileyo kukuba ukuthenga ukusuka umthengisi lokwenene ngokufanelekileyo-singcolile ukuze aphuthise nethemba naziphi na izehlo ezinjalo. Le ndlela akuyi ulahlekelwe indlela yakho kwaye akukho mfuneko yokuba ukhathazeka kakhulu malunga yezithuthi ezizayo. I-2 Wheel Ukulinganisela Isithuthuthu ngu Powerboard`s ibhetri ...Funda ngaphezulu »
ikhuselekileyo kwaye best self balancing ngezithuthuthu ezintathu kuhlaziywa
ixesha Post: Aug-23-2017
Le hoverboard bamkelekile ngabantu abaninzi abatsha, ngenxa yokuba ndizuze engenasiphelo noyolo yaye phezu ekhwele hoverboard, kodwa ukukhetha indlela isithuthuthu ekhuselekileyo self balancing? Ngoku makhe sincome amathathu nelingatyabuli kakhulu self balancing isithuthuthu kuwe. Eyokuqala i KOOWHEEL uphawu Self Balanc ...Funda ngaphezulu »
1. Imeko Uphuhliso self balancing scooter 2. Ukugcina imarike yemoto eseleyo. 3. eziluncedo market K8 kunye Njani Ithemba Kwiminyaka yakutshanje, kunye nokuphuculwa ngesifo sephepha, izithuthi amandla amatsha - iimoto eseleyo zathandwa ngabathengi basekhaya angaphandle ngenxa zemvelo ...Funda ngaphezulu »